Iska hor imaad ka dhacay magaalada marka ee xarunta gobalka sh/hoose – STAR FM SOMALIA
Wararka aan ka helayno Magaalada Marka ee xarunta Gobolka Shabelaha hoose, ayaa sheegaya in saaka aroortii Magaaladaasi uu ka dhacay iska hor imaad u dhaxeeyay ciidamo ka tirsan Dowladda iyo rag maleeshiyaad ah.
Iska hor imaadkaan ayaa wuxuu ka dambeeyay, kadib markii Maleeshiyada hubaysan iyo ciidamada ay isku qabsadeen lacago laga qaado gaadiidka ka ambabaxa Magaalada, taasina ay keentay in dhinacyada ay dagaalamaan.
Inta la xaqiijiyay 3 ruux oo labo ka mid ah ay yihiin dhinacyada dagaalamay ayaa halkaasi ku dhaawacmay, halka ruuxa kalena uu ahaa qof shacab ah oo rasaasta waxyeelo ay ka soo gaartay.
Ciidamada wada dagaalamay ayaa markii dambe si iskood ah u kala dhaqaaqay, iyadoo aysan jirin cid ku soo baxday ama soo kala dhexgashay.
Magaalada Marka ayaa waxaa ku wada sugan ciidamo ka tirsan Dowladda Federalka Somaliya iyo ciidan Maleeshiyo beeleed ah oo xaafado ka tirsan Magaaladaasi hub ku dhex haysta.
Maamulka Koonfur Galbeed ayaa ku guuelsan la’ xasilinta ammaanka guud ee Magaalada Marka oo mar waliba ay ka dhacaan dilal qorsheysan iyo iska hor imaadyo.
Shacabka Magaalada Marka ayaa dhibanayaal u noqday dadka dushooda ku dagaalamaya Mar waliba
Ammaanka Garoonka Diyaaradaha Magaalada Gaalkacyo oo si weyn loo adkeeyay (Daawo Sawirada)